साउदी अरबको शाही परिवारले आफ्नो अस्तित्वको लागि खतरा ठान्छ यी सात कुरा | Ratopati
मङ्गलबार १० असार, २०७६ Tuesday, 25 June, 2019
साउदी अरबको शाही परिवारले आफ्नो अस्तित्वको लागि खतरा ठान्छ यी सात कुरा
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २५, २०७५ chat_bubble_outline0
बीबीसी । साउदी अरबका पत्रकार जमाल खाशोज्जी साउदी शाही शासकको खुलेर आलोचना गर्थे । अरबी भाषाबाट अनुवाद गरिएका उनका लेख र रिपोर्टहरु वाशिंगटन पोस्टमा छापिन्थ्यो ।
उनै खाशोज्जी गत अक्टोबर २ दिउँसो साढे एक बजे इस्तानबुलमा रहेको साउदीको वाणिज्य दूतावास गएका थिए । त्यो बेलादेखि अहिलेसम उनी देखिएका छैनन् ।
साउदी अरबमा लोकतन्त्र छैन, त्यसैले त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता पनि छैन । जमाल साउदी बाहिर बसेर त्यहाँको शाही शासकहरुको आलोचना गर्थे । साउदी अरब लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्ने पत्रकारहरुबाट सतर्क रहन्छ ।
मध्य–पूर्व मामिलाका जानकार कमर भन्छन्, ‘साउदी राजा सलमाललाई सत्ता पल्टिने डरले सताइरहन्छ । यसैले उनी बलियो सेना र स्वतन्त्र प्रेसबाट सधैं सावधान रहन्छन् ।’
आगाका अनुसार साउदी सेना कमजोर हुनुको कारण यही हो किनकी त्यहाँका शाही परिवारको मनमा कतै सेनाले देशको सत्ता हडप्ला भन्ने डर निरन्तर हुने गर्छ ।
साउदी अरबको गतिविधि
साउदी अरबले बहराइन र यूएईसँग मिलेर कतारविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । तब त्यो नाकाबन्दी हटाउन साउदी युवराज मोहम्मद बीन सलमानले कतारले अल–जजिरा टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउनु पर्ने शर्त राखे । अल–जजीरा कतारको सरकारी लगानी भएको मिडिया हाउस हो । यसको प्रभाव बीबीसी र सिएनएन बराबर विश्वव्यापी हुँदै गएको छ । साउदीलाई अरब अल–जजिराको पत्रकारिता स्वीकार्य छैन ।
पछिल्लो हप्ता मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी राजा अमेरिकी सेनाको सहयोगबिना दुई हप्ता पनि सत्तामा रहन नसक्ने बताएका थिए । ट्रम्पले साउदीले आफ्नो सुरक्षाका लागि लगानी बढाउनुपर्ने पनि बताएका थिए ।
ट्रम्पको टिप्पणीलाई विश्वभरका मिडियामा साउदीको अपमानका रुपमा पेश गरियो । इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावेद जरीफले ट्रम्पले साउदी अरबलाई लगातार अपमान गरेको भन्दै उसले अब छिमेकीहरुलाई सहयोग गर्नेबारे सोच्नुपर्ने बताए ।
योसँगै प्रश्न उठछ कि कतै साउदी शाही परिवार डरको मानसिकतामा त बसिरहेको छैन ? साउदी अरब विश्वकै धनी देशहरुको सूचीमा पर्छ । तर प्रश्न उठेको छ के आफ्नो सुरक्षा समेत आफै गर्न सक्षम छैन ? साउदीलाई चिन्तित बनाउने अरु डरहरु के के हुन् ?
विश्लेषकहरुको विश्वसमा पछिल्लो दुई वर्षमा साउदी अरबले केही यस्तो फैसला गरेको छ जसले ऊ समस्याबाट निक्लनुभन्दा फस्दै गएको छ । सन् २०१६ मा नाम चलेका शिया धर्मगुरु निम्र अल–निम्रसमेत ४७ जनालाई साउदीले फाँसी दिएको थियो ।
उसले यमनसँग युद्धविराम अन्त्य गर्यो । इरानसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध समाप्त गरिदियो र सन् २०१७ मा कतारविरुद्ध नाकाबन्दीको घोषणा गरिदियो । यी फैसलाले साउदीलाई के फाइदा भयो त ?
साउदीले ‘गरिब’ तथा सानो देश यमनलाई अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन । साउदीले लगाएको नाकाबन्दीका कारण कतार साउदीले सोचेजस्तो कमजोर भएको छैन । इरानसँग थप दुश्मनी मोल्दै गएको छ । भनिन्छ कि साउदीले डरका कारण विभिन्न निर्णय लिने गरेको छ जुन पछि उसलाई भारी पर्ने गर्छ ।
साउदी अरबको मुख्य समस्या के हो ?
चर्चित पत्रकार तथा सम्पादक जेनिफर विलियम्सको विचारमा साउदी बाहिरी खतरा तथा आफ्नो कमजोरीको साथसाथै आफ्नो शासनको अन्तरविरोधमा जकडिएको छ । उनका अनुसार साउदीलाई जति बाहिरबाट डर छ, त्यति नै डर भित्रबाट पनि छ ।
सन् १९३२ मा औपचारिक रुपमै साउदी अधिराज्य बने देखिनै साउदी अरबले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ।
इरानमा इस्लामिक क्रान्तिदेखिनै साउदी अरबले इरानप्रति सधैँ आफूलाई आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यस्तै व्यवहार साउदीको सबै छिमेकी देशहरुसँग छ भन्दा पनि हुन्छ ।
सन् १९७९ नोभेम्बरमा हतियारधारी इस्लामिक उग्रवादीहरुको समूहले मक्काको अल–हराम मस्जिदलाई कब्जामा लिएको थियो । कब्जा पछि उक्त समूहले हाउस अफ् साउदलाई गिराउने घोषणा गरेको थियो ।
यो घटनाले साउदीको प्रतिष्ठामा ठूलो चोट पुगेको थियो । तथापी यसका बाबजुद पनि साउदीमा शाही शासन चलिरह्यो । सन् २००० को दशकको मध्यमा अल–कायदाको चरमपन्थ बलियो भयो । तब पनि साउदीको शासन भने चलमल भएन ।
केही वर्ष अघि अरब क्षेत्रका कयैन देशहरुमा लोकतन्त्रको माग गर्दै नागरिक सडकमा उत्रिए । त्यो बेला पनि साउदी अरबमा कुनै असर परेन यी सबै घटनाहरुलाई साउदी राजपरिवारको डरसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
साउदी शासनमा रहेको डरको मुल जरो
साउदीको नेतृत्वमा असुरक्षाको भावना बुझ्नको लागि केही तथ्यहरु जान्न जरुरी हुन्छ ।
इतिहासकार एलेक्सी वासिलिवले भीओक्सलाई दिएको इन्टरभ्यूमा भनिएको छ–साउदी अरबमा सातौं शताब्दीमा इस्लामको जन्मदेखि १८ औं शताब्दीसम्म विभाजित रह्यो ।
उनी भनेका छन्, ‘यहाँ सबै अरबीहरुसँग सत्ता थिएन । यो प्रायद्विपमा शान्ति र स्थिरता थिएन । सदियौंसम्म अरबका मानिस विभाजित थिए । धेरैजसोस–सानो राज्यमा बाडिएका थिए । उनीहरु घुमन्ते थिए र यीनका आ–आफ्ना गुट थिए । अरबमा घुमन्तेहरुबीच एकीकृत राज्यको परिकल्पना बिल्कुल थिएन ।’
जब साउदी अरबको जन्म भयो, यहाँका कबिलाहरुलाई एक गर्ने कोसिस गरिएको थियो । यो क्रम आज पनि जारी छ । साउदी शाही परिवारको बारेमा भनिन्छ कि उनीहरु नागरिकलाई एक बनाउनको लागि धर्म, पैसा र बलको प्रयोग गर्छन् ।
इरानमा सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति भएपछि साउदीका लागि असुरक्षाको भावना बढ्यो । इरानी क्रान्तिले मुसलमान विश्वमा एक प्रतिस्पर्धी इस्लामिक शासनको विकल्प पेश गर्यो । यसले साउदी राजपरिवारको मनमा असुरक्षित पैदा गर्ने अवस्था थियो ।
इरानी क्रान्तिले राजतन्त्रलाई समाप्त गरिदिएको थियो । सन् १९७९ मा इरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खोमेनीले खाडीका देशहरुमा अमेरिका समर्थित राजतन्त्रलाई फ्याक्न अपील गरे । उक्त अपीलमा उनले साउदीबाट पनि राजतन्त्र उखेलेर फ्याक्न भनेका थिए ।
इरान हुनत शिया मुस्लिम देश होला तर उसको शासन प्रणालीले मुस्लिम संसारको राजशाहीलाई चुनौति दिएको थियो । इरानले साउदीको तुलनामा आफैँलाई मुसलमानहरुको हितैषी भएको तस्वीर पेश गरेर साउदीलाई चुनौति दियो ।
साउदीको शाही परिवारको प्रासंगिकता साउदीको इस्लामिक साखसँग जोडिएको छ । साउदी इस्लामको रुढीवादी मानिने वहाबी धारालाई प्रोत्साहित गर्छ ।
साउदी शासकको डर
१.साउदी अरबको शाही परिवार सत्तामा आफ्नो पकड बनाइराख्न सधैँ सतर्क रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार वर्तमान समयमा साउदी राजपरिवार भित्रै पनि मतभेद रहेको छ । साउदीलाई इस्लामिक विश्वमा कतै इरान त हावी हुने होइन भन्ने डर छ ।
२.राजतन्त्रविरुद्ध कतै साउदी नागरिकहरुले विद्रोह नगरुन् । इतिहासमा टयूनिसिया र इजिप्टमा जसरी नागरिकहरुले विद्रोह गरेर आफ्नो सत्तालाई फ्याक्ने हो कि भन्ने निरन्तरको भय छ ।
३.सुन्नी चरमपन्थीको बृद्धिसँग पनि साउदीलाई डल लाग्छ । कतै त्यीनले आफूहरुलाई भ्रष्ट र गैर–इश्लामिक घोषित गर्लान् भन्ने उसमा डर छ । यही कारण अल–कायदा र इस्लामिक स्टेटको उदय पनि साउदी शाही परिवारको लागि डराउने कुरा हो ।
४. पूर्वी प्रान्तहरुमा शियाको उदय पनि साउदीको लागि चिन्ताजनक छ । साउदी अरबको पूर्वी प्रान्तहरुमा ठूलो तेल भण्डार रहेको छ र सोही क्षेत्रमा अल्पसंख्यकको बसोबास छ ।
५.सीमामा इरानको बढ्दो प्रभावले पनि साउदी अरबको शासकहरुलाई अत्याउँछ । खास गरि बहराइन र यमनको सीमा क्षेत्रमा इरानको बढ्दो प्रभावबाट साउदी चिन्तित छ ।
६.यदि अमेरिकाले साउदी राजपरिवारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर, पक्षधरता बदल्दै इरानतर्फ गयो भने पुरै स्थिति बदलिनेछ ।
७.मुस्लिमहरुको पवित्र स्थललाई लिएरु शाही परिवारबाट भरोसा उठ्ने डर छ ।
साउदी विमानस्थलमा आक्रमण
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलिरहेका बेला श्रीमानले ८ अर्ब बढीको चिट्ठा जिते, श्रीमतीलाई आधा दिन अदालतको निर्देशन
भारतीय काँग्रेसको नेतृत्व गान्धी परिवारभन्दा बाहिरबाट आउनसक्ने
चेन्नईमा पानीको हाहाकारः अस्पतालदेखि कलकारखाना, विद्यालयसम्म प्रभावित
बलात्कारका आरोपी सांसदले फरार हुँदा पनि चुनाव जितेका थिए, अहिले गरे आत्मसमर्पण
आफ्नै अंगरक्षकले गोली हानी इथियोपियाका प्रधानसेनापतिको हत्या
गुठी जग्गामा छाया सेन्टर : लगानीकर्ताका कारण लाचार प्रशासन
मेयरको घरमा प्रेसर कुकर बम
सरकारले धोका दिन सक्छ भन्दै निकालियो खबरदारी जुलस
मलेसियाको गाँठोः विज्ञ भन्छन्– चाबी मन्त्रीसँग छ, जहिले चाह्यो तहिले खुल्छ
मंगलबार कस्तो छ तपाईंको दिन ?
स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन नै सुशासन र लोकतन्त्रको आधार होः राष्ट्रपति भण्डारी